“Shaqaalaha Manchester City oo dhan waxay adduunka ka raadinayaan badelka Aguero” – Guardiola – Gool FM
(Manchester) 26 Jan 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ixtiraam weyn u muujiyay weeraryahnkiisa reer Argantina ee Sergio Aguero.
Pep Guardiola ayaa wuxuu isla markaas xaqiijiyay in kooxda ay adduunka ka raadineyso ciyaartoy karti leh oo kooxda Sky Blues wax u tari kara.
Wargeyska “Daily Mai” ee dalka England ayaa wuxuu soo xigtay wareysi uu Pep Guardiola kaga hadlay in Man City ay bilaawday olalaha ay ku raadineyso badelka Sergio Aguero, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Weeraryahan heysto rikoorro, ma fududa inaad hesho, waxaana u maleynayaa in kooxaha waaweyni ay u baahan yihiin tayada ciyaaryahankan oo kale”.
“Marka Sergio Aguero uu ku faraxsan yahay awoodiisa jireed, wax walba ayuu sameyn karaa”.
“Waxaan halkaan ku heysanaa shaqaalo inooga raadiya ciyaartooy cusub oo hibo leh wadamo kala duwan”.
“Waxaa jira Shaqsiyaad badan oo igaala hadlay magacyada ciyaartooy, waxayna ii soo bandhigeen muuqaaladooda, laakiin kuma arkin inay heystaan tayo qaas ah”.
Si kastaba ha noqotee, Aguero ayaa Manchester City kaga soo biiray Atletico Madrid sanadkii 2011, waxaana uu noqday xiddiga ugu goolasha badan taariikhda kooxda Sky Blues, kaddib markii uu dhaliyay 252 gool.
Sergio ayaa la rajeenayaa inuu ka tagi doono kooxda Manchester City, sida ay daabaceen wargeysyada gudaha dalka England, kaddib marka uu dhamaado qandaraaska uu ku joogo Etihad Stadium xilli ciyaareedka soo socda.
Kooxaha xiiseynaya adeega weeraryahankan reer Argantina ee Sergio Aguero waxaa hoggaamineysa kooxda reer Mareykan ee Inter Miami, taasoo uu milkiyadeeda leeyahay halyeeyga reer England iyo naadiga Manchester United ee David Beckham.